Meepyat — Steemkr
Ukwazi i-vocabulary yingxenye ebalulekile yokufunda ulimi ngoba ngaphandle kokwazi amagama athile, noma ukwazi ukuwachaza, ungavinjelwa. Ngakho-ke yiziphi izindlela ezingcono zokuthuthukisa i-vocabulary yakho yesiNgisi? Nanka eminye imibono ongayenza.
Uma ufunda isilulumagama, zama ukusebenzisa kuphela izincazelo zesiNgisi ukukusiza ukuthi uqonde incazelo, futhi ushiye ukuhumusha njengendlela yokugcina lapho ungakwazi ukuyiqonda ngempela. Ngokunamathela kwisiNgisi kuphela kungenzeka ukuthi ukhumbule igama futhi kuzokusiza ukuba uqale ukucabanga ngesiNgisi. Kunezinye izichazamazwi ezinkulu zesiNgisi ku-inthanethi, njenge-www.ldoceonline.com. Lewebhusayithi nayo inenzuzo yokufaka imifanekiso njalo nencazelo yezinto. Ungase uzame ukwenza lokhu ngokwakho uma uthola igama ongaziwa - yenza usesho lwe-intanethi ngaphansi kokukhetha 'Izithombe' futhi uzothola isithombe sento.
Uma ufunde ukusebenzisa igama elisha, kuyasiza kakhulu ukufunda amagama anencazelo efanayo. Lawa magama abizwa ngokuthi ama-synonyms. Isibonelo, ezinkulu - ezinkulu, ezinkulu, ezinkulu, ezinkulu. Ama-synonyms ayindlela enhle yokukusiza ukuthi uqonde incazelo yegama elisha, futhi futhi, ukusebenzisa isichazamazwi 'IsiNgisi kuphela' kungakwenza ukwazi ukwenza lokhu.
Shintsha isilungiselelo solimi efonini yakho
Lena indlela ejabulisayo yokufunda imigomo eminingi esiyisebenzisa nsuku zonke kwezobuchwepheshe nokuxhumana, kodwa futhi kuyindlela enhle kakhulu yokufunda olunye ulwazimagama. Uma usetha ifoni yakho ngesiNgisi, izinhlelo zokusebenza ezifana ne-'Mozulu 'ne' Agenda 'zizoba ngesiNgisi ukuze usebenzise izichasiselo zesimo sezulu kanye nezinsuku zeviki nezinyanga. Isenzo esincane esilula njengalokhu singakusiza ufunde amagama amaningi ngaphandle kokubona.
Funda okuthile ngesiNgisi nsuku zonke
Akuwona wonke umuntu othanda ukufunda izincwadi noma omagazini, futhi ukufunda incwadi ngesiNgisi kungaba nzima kakhulu. Kodwa mina ukugembula ungakwazi ukuthola isikhathi sokufunda imigqa embalwa kanye ngosuku inthanethi. Khumbula, akudingeki kube yinto engathí sina noma yezemfundo. Namuhla kukhona izinto ezitholakala ku-intanethi mayelana nayo yonke into ekhona engacatshangelwayo - imicu emfushane yamahlaya, amahlaya, amazwana mayelana nezemidlalo noma ezokuzijabulisa ezindabeni zokuxhumana nabantu, izincazelo zemikhiqizo, izingoma zomculo ... uhlu alupheli. Uma ungenza umzamo wokufunda okuthile kaningi, noma ngabe ufushane, kuzokusiza ngempela ukukhulisa amagama akho.
Gxila ezintweni zakho
Ngokwemvelo sivame ukukhumbula izinto esizinesithakazelo ezingcono kakhulu kunezinto esizinandaba ngazo. Ngakho zama ukufunda futhi ubuyekeze isilulumagama ngendaba oyithola ithakazelisayo. Isibonelo, uma uthanda izingoma ngo-Ed Sheeran, funda okuthunyelwe kwakhe kumanethiwekhi omphakathi, bese uzama ukuqonda amagama wezingoma zakho ozithandayo. Uma ungumdlali omkhulu we-Real Madrid, funda izindaba noma ubuke amanye amavidiyo mayelana nezenzo zawo zakamuva. Uma ufunda isilulumagama esihlobene nemikhuba, kungenzeka uthole ingxoxo nomuntu othanda kakhulu odumile ochaza indlela yakhe yansuku zonke.
Sebenzisa imindeni yamagama
Ukubeka amagama ngamaqembu ngenhloko efanayo kungenza ukutadisha kwakho kuphumelele kakhulu. Ungakwazi ngisho nokudala amabalazwe wombhalo ngamaqembu ahlukahlukene wamazwi anesixhumanisi esivamile. Ngokwesibonelo,
Indlu (isihloko esiyinhloko):
ikhishi - efrijini, ikhiphe, ihhavini - ukupheka, ukubhaka, ukubhaka
ekamelweni lokulala - ithelevishini, itafula, i-sofa - kuhlala, phumula, funda
ekamelweni lokulala - embhedeni, ideski, ikhabethe - izingubo, ugqoke
Kulula ukuqonda futhi ukhumbule silulumagama uma amagama ehlobene kunamazwi ahlukanisiwe angenayo isihloko esivamile.
Enye indlela ethokozisayo yokufakazela ukukhumbula amagama amasha ukubeka amalebuli noma ukuthunyelwa kwayo ezintweni ezizungeze indlu yakho negama lesiNgisi lento ebhaliwe kuzo. Uyomangala ukuthi lokhu kuzokusiza kanjani ufunde amagama amasha. Ungangeze ngisho nezenzi (amagama esenzo) kanye namabizo.
Zijabulise ukuzivocavoca umzimba
Ukuzivocavoca ngokusobala kukusiza ufunde silulumagama, kodwa akudingeki ukuba kubhalwe phansi. Zama ukwenza ezinye izindlela zokuxhumana ezifana nathi esinaso e-Wall Street English, ezijabulisa ngempela! Lezi zingase zihlanganise ukudonsa nokudonsa imibuzo, amagama afanayo okushoyo, i-gap-igcwalisa, imidlalo yokupela isipelingi nokunye okuningi.
Congratulations @kyawthuu! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :